ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: September 2011
မြို့ တော်ဝန်အဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်ရွေးချယ်ခံမည့် မြည်းတစ်ကောင်....
ဘူဂေးလ်ရီးယားနိုင်ငံ၊ ဗာနာမြို့ မှ ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးလှုံ့ ဆော်သူများဟာ လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင်
လက်ရှိမြို့ တော်ဝင်နှင့် ယဉ်ပြိုင်ရွေးချယ်ခံရန် မြည်းတစ်ကောင်အား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆန္ဒပြုတင်သွင်း
ကာ ပြင်ဆင်လှုံဆော်နေကြပါတယ်...
မာကို အမည်ရှိမြည်းဟာ ဘူဂေးလ်ရီးယားလူ့ ဘောင်သစ်ပါတီကိုကိုယ်စားပြုပြီး အောက်တိုဘလ ၂၃ ရက်
နေ့ တွင် ကျင်းပမြည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
စိတ်ဓါတ်ခိုင်ကြည်စွာ တာဝန်များကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ၎င်း၏နိုင်ငံရေးကန့် လန့် 
ကာစာမျက်နှာစတင်ဖွင့် လှစ်သည့် အချိန်တွင် ကတိပေးပြောဆိုသွားပါတယ်...( ထိုပါတီမှပုဂ္ဂိုလ်များက
ပြောတယ်ပေါ့ ဗျာ....မြည်းကပြောတယ်လို့ လည်းအဟုတ်မထင်ပါနဲ့ ဦး...)
လက်ရှိ မြို့ တော်ဝန်မင်း ကီရေးလ်ယော်ဒါနော့ဟာတာဝန်များကိုကောင်းမွန်ကျေပွန်စွာမထမ်းဆောင်နိုင်
ဘူလို့ မြို့ သူ၊မြို့ သားများကထင်မှတ်ယုံကြည်ကြတာကြောင့် ယခုကဲ့ သို့ မြည်းတစ်ကောင်ကို ၎င်းနှင့် ယှဉ်
ပြိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
စည်းရုံးလှုံ့ဆော်သူ အိန်ဂျယ်ဒိုင်ယန်ကော့ ဗ် က " တစ်ခြားမြို့ တော်ဝန်လောင်း ပြိုင်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်
များနှင့် မတူတဲ့ အချက်က မြည်းမာကို ဟာကိုယ်ကျင့် သိက္ခာတည်ကြည်ဖြောင့် မတ်လွန်းတဲ့ သူဖြစ်ပါ
တယ်...သူဟာ ခိုးလည်းမခိုးတတ်ပါဘူး၊ လိမ်လည်းမလိမ်ညာတတ်ပါဘူး...(ပြည်သူကပေးတဲ့ တာဝန်၊ခိုင်း
တဲ့ ) အလုပ်ကိုလည်း ကျေပွန်ပြီစီးအောင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တတ်ပါတယ်..." လို့ ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်...
ကျွန်တော်ကတော့၁၀ ရာခိုင်နှုံးပွဲခလည်းမယူပါဘူး...မုန်လာဥနီလေးသာနပ်မှန်အောင်စားရမယ်ဆိုယင် ရပါပြီ...
Will work for carrots...Marko the donkey has been put up asacandidate for mayor
သို့ သော်လည်း လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်သည့် လက်ယာယိမ်းအလယ်အလတ် ဂါ့ ဘ်ပါတီအားကိုယ်စား
ပြုယှဉ်လက်ရှိမြို့ တော်ဝန်ယောဒါနော့ ဗ် ကတော့ ပြိုင်ဖက်ဖြစ်သူနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရင် ဂုဏ်သိက္ခာကျမှာမို့ ပါ
၀င်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ပြုဖို့ ငြင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" သူပြောတာမှန်ပါတယ်...အခုလိုနိုင်ငံတော်ကိုလိမ်လည်လှည့် ဖြားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးလူလိမ်လူညာတစ်
ယောက်နဲ့ စင်ပေါ်မှာအတူ( စကားစစ်ထိုး၊စည်းရုံးဟောပြောနေနေ ) ရှိနေရမှာကို မြည်းမာကို တစ်ကောင်
ဘယ်လိုခံစားရမလည်းဆိုတာသာ တွေးကြည့် ပါတော့ ...
ကိုယ့် ကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိတဲ့ မြည်းအနေနဲ့ သိက္ခာတောင်ကျသွားနိုင်ပါသေးတယ်..." လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်...
မြို့ ကလေးပါတ်ဝန်းကျင်တွင် စိမ်းလန်းစိုပြေသည့် စားကျက်မြေများ ကုန်ဆုံးကွယ်ပျောက်နေတာမို့ မြည်း
ကလေး မာကိုအတွက်လည်း ဘ၀ရပ်တည်ေ၇းဟာ အခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်လို့ အခြားသောစည်း
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှည်လောင်း မြည်းမာကိုအနေနှင့် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို အ
လေးပေးသွားမှာပါလို့ဒေသဆိုင်ရာသတင်းမီဒီရာတွေကဆိုကြပါတယ်...
တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်အုပ်ချူပ်တာကမှတို့ မြို့ အတွက်ကောင်းဦးမယ်ဆိုတဲ့ ဘူဂေးလ်ရီးယားက မြို့ ကလေး..
Town hall campaigners in Varna, Bulgaria, are set to make an ass out of local politicians by putting upadonkey asacandidate for mayor.
Marko is standing for the Society foraNew Bulgaria party on October 23.
Campaign director Angel Dyankov said: "Unlike the other mayoral candidates and politicians, Marko hasastrong character, doesn't steal, doesn't lie, and gets the work done."
But incumbent mayor Yordanov, who is running asanominee of the ruling centre-right party GERB, has refused to shareaplatform with his rival saying it is "undignified."
Dyankov said: "He is right. Just think how Marko would feel sharingastage with suchapolitical crook."
He added: "It would be very undignified for any self respecting donkey."
Published Sept 29 2011
Posted by Unknown | at 3:00 AM |0comments
သူမ၏ဆောင်ကြာမြိုင်၊ဇာခန်းဆီးနောက်ကွယ်မှ ဇတ်လမ်းများအား အွန်လိုင်းပေါ်တွင် မျှဝေခံစားတင်ပြ
လေ့ ရှိသည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြည့် တန်ဆာ ဘလော့ ဂ်ဂါ ရိုရှောင်အန် ဟာရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ့ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ 
သူမ အဖမ်းခံရသည့် သတင်းဟာ (တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ )အင်တာနက်ကမ္ဘာကိုတုန်လှုပ်ချောက်ခြားသွားရုံမျှမက
သူမရဲ့ ဘလော့ ဂ်ပရိတ်သတ်များအနေနှင့် သူမအားကူညီ၊ ကယ်တင်ပါရန် တောင်းဆိုပန်ကြားခဲ့ ကြသလို၊
(သူမနှင့် အိပ်စက်ပျော်ပါးခဲ့ ကြသည့် ) ဟန်ကျိူးမြို့ မှ ထိပ်တန်းနိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ပညာရေးဌာနဆိုင်
ရာ အရာရှိကြီးများလည်း စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ ကြပါတယ်...
ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် သူမ၏ ဖုံးထဲမှ အစိုးရအရာရှိကြီးများနှင့် တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခများအပါအ၀င်အထူးအ
ရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များစွာတို့ ၏ဖုံးနံပါတ်များအားတွေ့ ရှိခဲ့ ရတယ်လို့ သတင်းများကဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်....
ထိုအချက်အလက်ကြောင့် သူမ၏ပုံမှန်အားပေးသူဖောက်သည်များတွင် အစိုးရထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ
ပါဝင်နေလိမ့် မည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများအား သံသယရှိစေခဲ့ ပါတယ်...
ဘလော့ ဂ်ရွာထဲက...သပေါ့ ဖျာသည်မလေး မနှင်းဆီ အဲလေ...ရိုရှောင်အန်...
အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ ရို ဟာခုနှစ်တာကာလအတွင်း အမျိူးသားပေါင်း ၃၀၀၀ ခန့် နှင့် အတူအိပ်စက်
မွေ့ လျော်ဖျော်ဖြေခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
စာရေး၊စာဖတ်တာကို စွဲလမ်းနှစ်သက်တဲ့ မိန်းကလေးဟာ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ ဂ်မှာ သူမနှင့် ဆက်ဆံ
ခဲ့ သူများနှင့် ပါတ်သက်သည့် အကြောင်းများအားရေးသားကာ အွန်လိုင်းဘလော့ ဂ်ဖတ်သူများအားမျှဝေခံ
သူမရဲ့ အရေးအသားကောင်းမွန်လှတာကြောင့် အစဉ်တစ်စိုက်လာရောက်ဖတ်ရှုသူပေါင်း၁သိန်း ၇သောင်း
မျှရှိပြီး သူမအား စာရေးကောင်းသလို၊ အထာပေးကောင်းသည့် ဇယားလေး လို့ နာမည်ပေးခဲ့ ကြပါတယ်..
သူမနောက်ဆုံး ပို့ စ်တင်ခဲ့ သည်က စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ မို့ သူမအားလွန်ခဲ့ သည့် ရက်သတ္တပါတ်
က ဖမ်းဆီးခဲ့ ကြသည်ဟု ယုံကြည်ရပါတယ်...
အခြားတစ်ဦးကတော့ စာဖတ်ဝါသနာကြီးသည့် ပါမောက္ခကြီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ဖြင့် သူမကရေးသားခဲ့ ပါ
သူမတွင် အမျိူးသမီးဖောက်သည်တစ်ဦး(လိင်တူချင်းဆက်ဆံသူအမျိူးသမီး) ပင်ရှိသေးသည်ဟု သူမကဆို
ရဲတပ်ဖွဲ့ ကိုတော့ သူမအားဖမ်းဆီးခဲ့ မှုနှင့် ပါတ်သက်၍ အတည်ပြုရန်ဆက်သွယ်လို့ မရခဲ့ ပါဘူး...
စင်္ကာပူ၊ခြင်္သေ့ ကျွန်းက asia one အင်တာနက်သတင်းစာမျက်နှာမှာတော့ အဆိုပါမိန်းကလေးဟာ အမှန်
စင်စစ်တော့ အွန်လိုင်းတွင်နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားလိုသူ အမျိူးသားတစ်ဦးသာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါ
virtual world လို့ ခေါ်တဲ့ အတုအပကမ္ဘာကြီးမှာ ဘယ်သူ့ ဟာဖြင့် အစစ်အမှန်၊ ဘယ်သတင်းဟာဖြင့် ယုံ
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုယ့် ညီရေ...
Ruo Xiaoan,aChinese prostitute who loved to share her stories online, has been nabbed by police.
News of her arrest, not only shook the cyber world - with her fans appealing for help - but the politicians and educationists in Hangzhou have also been disturbed.
It was reported that police foundalong list of telephone numbers of VIPs – including government officials and university professors - in her cellphone.
This has led the investigators to suspect that the VIPs were her regular customers.
Ruo, 22, was said to have had sex with some 3,000 men over the past seven years.
A girl who loves to read and write, she always posted stories about her customers on her blog, sharing them with the netizens.
Her writing skill has impressed the netizens, attracting 170,000 followers, who named her the "Most Literary Prostitute".
She was believed to have been arrested last week, and her last posting on the weibo was dated Sept 16.
Ruo had wrote that she hasacustomer, who loves to have sex in the car, and another isaprofessor who loves to read.
She also claimed that she hadafemale customer.
The police could not be reached to comfirm the arrest of Ruo.
Published Sept 27, 2011
Posted by Unknown | at 3:30 AM |3comments
Labels: news; daily chilli
ဗြုံးကနဲကြည့် ယင်အတည့် လို့ ထင်ရပေမယ့် သူ့ လက်တွေကိုက အရိုးတွေပျော့ ပြောင်းလွန်းလို့ 
ရှားပါးထူးဆန်းတဲ့ မွေးရာပါချွတ်ယွင်းမှုရှိနေသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံမှကျောင်းသားတစ်ဦးဟာ စန္ဒယားအား
နောက်ပြန်ထိုင်ကာ တီးနိုင်သဖြင့် အင်တာနက်အွန်လိုင်းတွင် နာမည်ကျော်ကြားနေပါတယ်...
အီဗန်ပီထရုန်း ဟာစန္ဒယားခုံတွင်ခလုပ်များအားကျောခိုင်းပြီးနောက်ပြန်ထိုင်ကာ ၎င်း၏လက်များအား လိမ်
ကောက်လှည့် ဖျားကာ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိသော ပုံစံအနေအထားဖြင့် စန္ဒယားသံစဉ်တေးသွားများအားတီးခတ်
နေပုံကို ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးထားခဲ့ ပါတယ်...
ပီထရုန်းဟာ အီလားစ်ဒန်းလော့ စ် ဟုခေါ်တွင်သည့် အရိုးအဆစ်၊ အရွတ်များ ပျော့ ပြောင်းသည့် ရောဂါ
" ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော့ ရဲ့ လက်မောင်း၊ လက်ဖျံတွေကို ပုံစံအမျိူးစုံ လှည့် ပြောင်း၊ ကွေ့ ကောက်နိုင်ပါ
တယ်...အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း စန္ဒယားများနောက်ပြန်တီးလို့ ရနိုင်မလားလို့ တွေးတောမိလာခဲ့ ပါတယ်.."
လို့ သူကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
သူက တီးခတ်ရလွယ်ကူပြီး ပြန်ကျော့ နိုင် (အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်တီးခတ်နိုင်) သည့်တေးသွားကိုရွေးချယ်
လေ့ ကျင့် ခဲ့ တာဖြစ်ပြီး ထိုကဲ့ သို့ ကျွမ်းကျင်နိုင်နင်းစွာတီးခတ်နိုင်ရန် ၅ နာရီကြာလေ့ ကျင့် ခဲ့ ရတယ်လို့ 
" လုံးဝကြီးကို ခြားနားတဲ့ အနေအထားမျိူးမှာတီးခတ်နိုင်ဖို့ ဦးနှောက်ကိုအပြင်းအထန်စူးစိုက်ကာလေ့ ကျင့် 
ခဲ့ ရပြီး တော်တော်ကိုခက်ခဲလှတာဖြစ်ပါတယ်...
ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးကိုကြည့် ယင် အမှားအယွင်းတွေရှိနေဦးမှာ တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်...ကျွန်တော့ ရဲ့ အ
ရိုးအဆစ်ပျော့ ရောဂါကြောင့် လူတွေသတိထားမိလာတာကိုတော့ ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘာပြီး ပင်ကို
အရကျွန်တော်ဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်သူတစ်ဦးပါ...အခုလိုအရိုးအဆစ်ပျော့ ပြောင်းတဲ့ ရောဂါကြောင့် ဘ
၀မှာ အကန့် အသတ်အတွင်းနေထိုင်ရသူတွေရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်..." လို့ သူ
A US student witharare genetic condition became an online star - by playing Coldplay's Clocks with his back to the piano.
Evan Petrone filmed himself sitting down, facing away from the keyboard, before twisting his arms intoaseemingly impossible position to play the tune.
Mr Petrone has Ehlers-Danlos Syndrome which means he has unusually loose joints and ligaments.
"I've always been able to bend my arms all over the place," he said. "And I eventually began to wonder if I could play piano backwards."
Mr Petrone said he chose the song because it was simple and repetitive, but it still took him more than five hours to master.
"I had to force my brain to play inacompletely different way, and it was extremely difficult," he says. "You can tell there are still mistakes in the video.
"I feel bad getting attention for my EDS, because I literally have the fun kind. I know people who suffer chronic pain because of their EDS and live very restricted lifestyles."
Posted by Unknown | at 10:51 AM |0comments
Labels: news/ video : daily picks and flocks
Posted by Unknown | at 9:22 AM |4comments
မလေးရှားနိုင်ငံမှ ပြည့် တန်ဆာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဟာအလုပ်အလွန်များနေသည့် 
လုပ်ငန်းရှင်၊ အရာရှိများ၊ ဇနီးမယားများကအချိန်ပြည့် စောင့် ကြည့် အကဲခတ်ခြင်းခံနေကြရသည့် အိမ်
ထောင်ရှင်အမျိူးသားမျးအတွက် အချိန်ကုန်သက်သာကာ၊ သံသယကင်းစွာဖြင့် အဆာပြေမွေ့ လျော်ပျော်
ပါးနိုင်ရန် နေ့ လည်စာစားချိန်တွင် အမျိူးသမီးငယ်များအား ရုံးခန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်များသို့ အရောက်ပို့ ဆောင်
အဆိုပါအဖွဲ့ အနေဖြင့် ပုံမှန်အားပေးသုံးစွဲနေသူဖောက်သည်များထံ နေ့ လည်စာစားချိန်များတွင်(သာမာန်
သူများဆိုလျှင် သတိမပြုနိုင်မည့် ) လျှိူ့ ဝှက်သင်္ကေတဖြင့် ရည်ညွှန်းထားသည့် အစားအသောက်အမည်
များဖြင့် ( အလိုရှိသည့် အမျိူးသမီးများအားမှာယူ / ခေါ်ယူနိုင်ရန် ) ဖုံးမက်ဆေ့ ခ်ျ ( သတင်း ) များပေးပို့ 
ဈေးနှုံးများကတော့ ထိုကဲ့ သို့ ပြည့် တန်ဆာအဖြစ်လုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ထောင်ရှိသူအမျိူးသမီးများက တစ်ခါ
မွေ့ လျော်ပျော်ပါးလျှင် မလေးရှားရင်းဂစ်ငွေ ၂၀၀ ဖြစ်ပြီး အမျိူးစုံသည့် နိုင်ငံတကာမှအမျိူးသမီးများက
တော့ ရင်းဂစ်ငွေ ၁၇၀ သာကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်...
အားပေးစားသုံးသူများခံတွင်းတွေ့ စေဖို့ တစ်ခါတစ်ရံစူးစူးရှရှလေးအရသာရှိမည့် ထိုင်းတုံယမ်း ကလေးများ
ရတတ်သလို လျှာရင်းမြက်စေမည့် တရုတ်ခေါက်ဆွဲလေးများလည်းအဆင်သင့် ရှိနေသကဲ့ သို့ ခံတွင်းလိုက်
စေမည့် အင်ဒိုနီးရှားပုဇွန်ထုတ်ကွေး ကလေးများလည်းရတတ်နိုင်ပါသေးတယ်...
ရွှေပြည်ကြီးမှ စွဲမက်ဖွယ်အမျိူးသမီးရွှေမလေးများကိုတော့ မြန်မာ့ ကြက်စပ်ပဲငပိ ဟုအမည်ပေးထားပြီး၊ ယူ
ကရိန်းမှ စိမ်းလန်းစိုပြည်သူလေးများကိုတော့ ယူကရိတ်သတ်သတ်လွတ်ဟင်းချိူလို့ ခေါ်ဆိုထားပါတယ်...
မှာယူအားပေးသူများအနေဖြင့် အစားသောက်များအား၄၅မိနစ်အတွင်း စိတ်ကြိုက်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်..
ပေးပို့ သည့် ကြေငြာမက်ဆေ့ ခ်ျ(သတင်းစကား) များအရမှာကြားမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်
အမျိူးသမီးများအားချက်ချင်းပို့ ဆောင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်...
အမျိူးသမီးအများစုကတော့ အသက် ၂၅ နှစ်အောက်ဖြစ်ပါတယ်...
မလေးရှားမှာရနိုင်တဲ့ မြန်မာ့ ကြက်စပ်ပဲငပိပါတဲ့ ...
ခါးတွင်းပျက်နေတယ်လို့ ဆိုတဲ့ ဘကြီးတစ်ယောက်ကိုသတိရမိပါရဲ့ ...
A syndicate is offering prostitutes during lunch hours to busy individuals or those who are closely monitored by their spouses.
The syndicate would send SMSes to their regular customers with secret codes disguised as food items.
And the price for "home-cooked food" (housewife) is RM200 and "international cuisine" (foreign women) costs RM170.
Sometimes, the syndicates also offers 'Thai tom yam soup', 'Cantonese fried noodles' and 'Indonesian spicy prawn' to their customers.
Myanmar women are termed 'Myanmar chili bean paste meat' and Ukrainians are called 'Ukraine vegetable soup'.
The SMSes state that the customers have only 45 minutes to "taste the food".
According to the SMSes, the women would be delivered to their customers once they receive the orders.
Most of the women were said to be below 25 years old.
Published Sept 25, 2011
Posted by Unknown | at 10:56 AM |3comments
Labels: news: guang ming daily
Man climbs 15 stairs on his head
ကြိမ်ဖန်များစွာလေ့ ကျင့် ခြင်းရဲ့ ရလာဒ်ပါပဲ...
Posted by Unknown | at 10:21 AM |0comments
Labels: strange: video clip
Turkish morgue ready for the resurrection of the dead
သေဆုံးသွားခဲ့ ပြီဟုယူဆကာ အတည်ပြုပြီး ရေခဲတိုက်သို့ ပို့ ဆောင်ထားခဲ့ ပြီးနောက် အမှန်တစ်ကယ်အား
ဖြင့် အသက်မသေပဲ မေ့ မြောနေခဲ့ ရာမှ သတိပြန်လည်လာသူများအားကယ်တင်နိုင်မည့် အသက်ကယ်အ
ချက်ပေးစနစ်ပါဝင်သည့် ရေခဲတိုက်( လူသေအလောင်းများခေတ္တထားရှိရာအအေးခန်း )တစ်မျိူးအား တူရ
ကီနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းရှိဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချူပ်မှုအဖွဲ့ ရုံးစိုက်ရာမြို့ တွင်တည်ဆောက်ခဲ့ ပါတယ်..
ရေခဲတိုက်အတွင်းရှိ အအေးခန်းများအနေဖြင့် အတွင်းပိုင်းတွင် လှုပ်ရှားမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက တုံ့ ပြန်နိုင်
အောင်ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားသည်ဟု တူရကီနိုင်ငံမှအနာတိုလီယာ သတင်းဌာနက ဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်..
အနူးညံ့ ၊ အသိမ်မွေ့ ဆုံးလှုပ်ရှားမှုကလေးတစ်ခုကြောင့် ပင်လျှင် အရေးပေါ်သတိပေးချက်အား သက်ဝင်
တံခါးခလုတ်ကလေးဖွင့် ပြီးကိုယ့် ဘာသာကိုယ်ထွက်လာနိုင်ပါလိမ့် မယ်...
"ဆရာဝန်များက သေဆုံးခဲ့ ပြီလို့ သတ်မှတ် ထားတဲ့ လူနာတစ်ယောက် သတိလစ်မေ့ မြောနေခဲ့ ရာမှ ပြန်
လည်သတိရလာခဲ့ လျှင်ဆိုတဲ့ အချက်အလက်ပေါ်ကိုအခြေခံပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှအခြေအနေအားလုံးကို ကျွန်
တော်တို့ ထည့် သွင်းတွက်ချက်ထားပါတယ်..." လို့ အဆိုပါတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်...
အအေးခန်းတံခါးများကို အတွင်းမှဖွင့် နိုင်မည့် လက်ကိုင်များပါတပ်ဆင်ထားပါတယ် လို့ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်
အကစ်ဖ်ကာယာဒါကမူ့ စ် ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ ပါတယ်...
မလတ်ယာ ပြည်နယ်တွင်တည်ရှိသည့် အဆိုပါရေခဲတိုက်တွင် လူသေအလောင်း ၃၆ ခုထည့် သွင်းသိမ်း
အခုအစီအစဉ်မျိူးကတော့ တစ်ကယ့် ကိုအအေးခန်း၊ ရေခဲတိုက်တိုင်းမှာလုပ်သင့် တဲ့ အစီအစဉ်ပါပဲ...
သေငယ်ဇောနဲ့ မြောနေခဲ့ ပြီး သတိလစ်နေခဲ့ သူခမျာ ဆရာဝန်၊မိသားစုများကသေပြီလို့ ထင်ပြီးရေခဲတိုက်
ဆီပို့ ခဲ့ ပြီးနောက် ပြန်လည်သတိရလာချိန်မှာ အားအင်ကုန်ခန်းနေတာကြောင့်ထထိုင်ကာမလျှောက်လှမ်း
နိုင်၊ အသံထွက်ပြီးအော်ဟစ်ကာအကူအညီမတောင်းနိုင်လို့ ဖြစ်စေ ( အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းပါသော်
လည်း လူနေအိမ်ခန်းဆေးရုံ၊ ရုံးခန်းများနှင့် ဝေးကွာသောကြောင့် ခေါ်မကြားအော်မကြားလည်းဖြစ်တတ်ပါ
သေးတယ်...)၊ ရေခဲတိုက်၊ အအေးခန်းတံခါးအတွင်းဖက်ကဖွင့် လို့ မရတာကြောင့် ဖြစ်စေ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် 
ကြောက်ရွံ့ စိတ်ဖြင့် နောက်တစ်ခါထပ်သေကြရတာကတော့ တွေးကြည့် ရုံမျှပင်ရင်နာစရာကောင်းလွန်းလှ
မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီလိုမြောနေခဲ့ ရာက သုဿန်ရောက်မှသတိရတာမျိူးတွေ၊ ရင်ခွဲရုံထဲမှာသတိပြန်ရခဲ့ 
တာမျိူးတွေရှိခဲ့ ဖူး၊ ရှိနေဆဲပဲဖြစ်မှာပါ...
သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဖတ်ရှုမိပြီး ယခုလိုအစီအမံများပါဝင်သည့် အအေးခန်းများ ဆောက်လုပ်နိုင်ပါ
The Turkish Anatolia news agency reported the mortuary's refrigerators are sensitive to movement inside. A cemetery official said the slightest motion would set off an alarm.
"If the patient, proclaimed dead by doctors, awakens fromastate of unconsciousness, then we consider each and every possibility," he said.
The official, Akif Kayadurmus, added that the refrigerator doors were kitted out with internal door handles. The mortuary in the municipality of Malatya province, hasacapacity for 36 bodies.
Posted by Unknown | at 7:43 PM |5comments
'It's great to be small': 2ft tall cheerleader (who is dwarfed by the Guinness World Records' Book) is crowned shortest woman
ကမ္ဘာ့ အရပ်အပုဆုံးအမျိူးသမီး စံချိန်သစ်ရှင်...
ကလေးငယ်များထိုင်သည့် ပန်းနုရောင်ထိုင်ခုံကလေးတွင်ထိုင်ကာ ကွန်ပြူတာသုံးကာအွန်လိုင်းတက်နေ
သည့် လူပုမလေး ဘရစ်ဂျစ် ဂျော်ဒန်ရဲ့ ခြေထောက်ကလေးများက ခုံအောက်ကိုမထိပဲ လေထဲမှာပင် တွဲ
ခုံကလေးနှင့် အရောင်တူလိုက်ဖက်သည့် ပန်းနုရောင်စားပွဲပေါ်ကသူမရဲ့ လက်ပ်တော့ (ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူ
တာလေး) အားစူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့် ရှုအသုံးပြုနေသည့် အမျိူးသမီးလေးအတွက်ကတော့ ကွန်ပျူတာနှင့် 
တွဲသုံးရသည့် မောက်စ်ကလေးကို ထိန်းချူပ်ကိုင်တွယ်ရသည်ကပင် အတော်အတန်အားစိုက်နေရပါသည်..
ဒါပေမယ့် ဒါဟာလည်း ကာစ်ကာ့ စ်ကီယာ ကောလိပ်မှ အဆိုအကဘင်ခရာတီးဝိုင်းခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်
သည့် အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ သူမအတွက်တော့ နေ့ စဉ်ဘ၀တစ်ခုလို ပင်ဖြစ်နေခဲ့ ပါပြီ....
အခုတော့ သူမအနေနှင့် သူသိထင်ရှားဟစ်အော်ကြွားစရာတစ်ခုထပ်တိုးလာခဲ့ ရပေပြီ...သူမအား ကမ္ဘာ့ 
ထူးဆန်းမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ကြီးက ကမ္ဘာ့ အရပ်အပုဆုံးအမျိူးသမီးအဖြစ် သရဖူဆောင်းပေး၊စံချိန်သစ်တင်ပေး
သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားလည်း အဆိုပါမှတ်တမ်းစာအုပ်နှင့် ပင် နင်လားငါလားထင်ရလောက်အောင်
အရပ် ၂ပေ၊ ၃ လက်မဖြင့် ကမ္ဘာအရပ်အပုဆုံးအမျိူးသမီး အဖြစ် တရားဝင်မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ ရလေပြီ...
Record breaker: Bridgette Jordan, 22, is officially the world's smallest woman, standing at just 2ft 3in (69cm) tall
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၊ ဆန်ဒိုဗယ်လ် ဒေသမှ အရပ် ၂ပေ၊ ၃ လက်မသာမြင့် သည့် မစ္စဂျော်ဒန်ဟာ အသက်
၂၀ အရွယ်ရှိ သူမ၏မောင်ငယ်ဖြစ်သူ ဘရက်ဒ်နှင့် အတူ အသက်ရှင်လျှက်ရှိသည့် ကမ္ဘာ့ အရပ်အပုဆုံး
မောင်နှမ စံချိန်ကိုလည်းတင်ထားနိုင်ခဲ့ ပါသေးတယ်...
သူမတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက်ပေါင်းရဲ့ အရပ်ဟာ ၅ပေ၊ ၅ လက်မသာရှိပါတယ်...
၂ပေ၊ ၄.၅ လက်မဖြင့် တူရကီနိုင်ငံမှ အရပ်အပုဆုံးအမျိူးသမီးစံချိန်ရှင် အီလစ်ကိုကာမန် ထံမှ ထိုစံချိန်ကို
လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ခဲ့ တဲ့ အပေါ် မည်သို့ ခံစားရပါသနည်းဟု မေးမြန်းခဲ့ ရာတွင် တစ်ကယ့် ကိုအံ့ သြ၀မ်းသာ
စရာပါပဲ လို့ သူမကဆိုခဲ့ ပါတယ်...
" ခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်ရတာ အန်မတန်မှကောင်းပါတယ်...လူတိုင်းဟာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့် အ၀
ရှိသင့် ပါတယ်လို့ ကျွန်မကတော့ ယူဆပါတယ်..." လို့ သူမကဆိုပါတယ်...
သူမတို့ မောင်နှမအတွက်တော့ ဘ၀ဟာ တိုတောင်၊ ပုပြတ်လွန်းလှပါတယ်...
Life's too short: Alongside her brother Brad, who stands at 3ft 2in, the pair are the shortest living siblings in the world
All singing: Bridgette Jordan isacheerleader at her college
ဘတ်စကက်ဘော ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီး ကာရာတေးလည်းလေ့ လာသင်ယူနေသည့် လူပုလေးဂျော်
ဒန်ကတော့ ဒီလို(စံချိန်ရှင်ဘွဲ့ ထူးကိုရလိုက်ခြင်းဖြင့် ) လူတွေဟာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးမတူကွဲပြားခြားနားတတ်
ကြပေမယ့် အားလုံးအဆင်ပြေသွားကြတာပဲဆိုတဲ့ သဘောကိုလူသားများ သဘောပေါက်သိမြင်ရန်အတွက်
အထောက်အကူဖြစ်လိမ့် မည်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ် လို့ ဆိုသွားပါတယ်...
Dinner time: Bridgette Jordan takes time out to sit on her home work surface to make some food
Perched onapink children's chair, Bridgette Jordan's legs are left to dangle in mid-air as she stretches out her arms to go online.
Looking intently at her laptop screen, it takes her some considerable effort to manoeuvre the mouse across the matching pink table.
But it's just the way of life for the 22-year-old dwarf - who is also an all-singing, all-dancing cheerleader with her friends at Kaskaskia College.
And she now has even more to shout about - after she was crowned the world's shortest woman, as chronicled in the new Guinness World Records' Book that appears to overshadow her as it sits by her side.
Ms Jordan, from Sandoval, Illinois, stands at 2ft 3in - and also holds the record for being part of the shortest living siblings, alongside her 20-year-old brother Brad.
Combined, the pair only reach 5ft 5in.
Asked how she felt about her title, which she scooped from Turkey's Elif Kocaman, who stands at 2ft 4.58in, she said: 'It feels awesome.
'It's great to be small. I believe that everyone should be confident in themselves.'
Mr Jordan, who stands atacomparatively giant 3ft 2in and enjoys playing basketball and learning karate, added: 'Hopefully this will goalittle way to helping people realise it's OK to be different.'
Posted by Unknown | at 7:50 PM | 1 comments
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ပြည်သူအများစုရဲ့ ဆန့် ကျင်ကန့် ကွက်သံတွေကျယ်လောင်လာတဲ့ အပေါ်
အစိုးရအနေနဲ့ ချွေးသိပ်သည့် ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့ သည့် ( နောက်ထပ်လည်း အခုလိုရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပျား
ရည်နှင့် ဝမ်းချသည့် လုပ်ရပ်များဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါဦးမည်...)အလုပ်ရုံဆွေးနွေးမှုမှမိန့် ခွန်းအပေါ်
ဖေ့ စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူတစ်ဦး ( ကြည်ဝါထွန်း ) ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆထောက်ပြချက်တွေကလည်းစဉ်းစားစရာ
ကောင်းလှတာမို့ ဖတ်ရှုလေ့ လာနိုင်ရင်ပြန်လည်တင်ပြပါတယ်...
၁-စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ လိုအပ်ချက် အဆုံးအဖြတ်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း တစ်လျှောက်တွင်လည်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသအထိ ဆက်လက်လေ့လာသွားရန် စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလည်း သပိတ်ကျဉ်း
စီမံကိန်းကို သဘောမတူညီခင်ကတည်းက ကြိုတင်မလေ့လာခဲ့တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေကို အခုမှ လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ ဝန်ခံမှုပေးရင် လေ့လာနေတဲ့ အချိန်မှာ စီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုကို လေ့လာမှုပြီး
စီးလို့ ဆက်လက် တည်ဆောက်သင့်၊ မသင့် အဖြေထွက်တဲ့အချိန်အထိ ရပ်ဆိုင်းထားသင့် ပါတယ်။
၂ -CPI ကုမ္ပဏီ၏ တင်ပြချက်အရ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းသည် ဘေးအန္တရာယ်အဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ တွင် အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ရေကြီးမှု(Flood) အခြေခံ၍ ဒဏ်ခံနိုင်သည့် ရေအားအဆောက်အဦများ၊ ငလျင်ဒဏ် ရစ်ခ်ျတာစကေး ၈ အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရေအားအဆောက်အဦများကို စနစ်တကျ တိုင်းတာတွက်ချက်၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီး တည်ဆောက်မည်ဆိုသော ကုမ္ပဏီ၏ တင်ပြချက်၊ အာမခံချက်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းတွင်လည်း အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မပြတ်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အာမခံမှုဆိုတာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ( စီမံကိန်းတည်ဆောက်သူ) နဲ့ စီမံကိန်း လုပ်ဆောင်ရန်အပ်နှင်းတဲ့ ပိုင်ရှင် က လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူး...ဒီလို တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှာပိုသတိထားရတယ်။ စနစ်တကျတိုင်းတာရတယ်။ ကမ္ဘာတဝန်းလုံးက အသိအမှတ်ပြုတဲ့ (Reputable Insurance Broker) က တာဝန်ယူမှု (Insurance Coverage )နဲ့ အာမခံပေးရတာ။ ဒီလိုအာမခံဘို့အတွက် စနစ်တကျတိုင်းတာမှုတွေကို ပိုင်ရှင်နိုင်ငံ နဲ့ နိုင်ငံတကာမှ အတတ်ပညာရှင် ၊ ဥပဒေပညာရှင်များမှ စနစ်တကျ အချိန်ယူတိုင်းတာ သတ်မှတ်ပီး PRI ( Political Risk Insurance ) ပြုလုပ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံကို ပေးပို့ရတာ။ တခါတရံ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ တန်ဖိုးတားမှုဟာ PRI တိုင်းတာလို့မရတဲ့ အထိတောင် ကျယ်ပြန့်မှုရှိလို့PRIလုပ်ပေးလို့မရတာတွေလဲ ရှိတယ်။ ဘယ်ပစ္စည်းများကို သုံးမည်မို့လို့ ဘယ်လိုအာမခံပါသည်လို့ တဖတ်သတ်အာမခံတယ်ဆိုရင် သူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာတည်ဆောက်ခဲ့ တဲ့ယန်စီမြစ်
၃ - ဧရာဝတီစီမံကိန်းများသည် ကြီးမားသောစီမံကိန်းများ ဖြစ်သည့်အတွက် နည်းပညာအရ ခိုင်မာမှု၊ သေချာမှုရှိ၊ မရှိကို သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာန မပါဘဲ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဖွဲ့စည်းပေးသော အင်ဂျင်နီယာ
ပညာရှင်များဖြင့် အချိန်ယူစစ်ဆေးသင့်ပါသည် ဆိုသော ဆွေးနွေးချက်ကိုလည်း အလေးထား ဆောင်ရွက်
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုရှိ ။ မရှိဆိုတာကို အချိန်ယူစစ်ဆေးဘို့ အလေးထားဆောင်ရွက်ရင် စီမံ
ကိန်းကို ရပ်ဆိုင်းထားဘို့အတွက် တောင်းဆိုမှုကိုလဲ အလေးထားသင့်တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ စနစ်တကျ သင်ကြားမှုမရှိခဲ့တဲ့ ပညာရေးစနစ်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတခုမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဖွဲ့စည်းထားသော ပြည်တွင်းက ကိုယ့်အမျိုးသားပညာရှင်တွေဆီက တိတိကျကျ ရနိုင်တဲ့ တိုင်းတာတွက်
ချက်မှုတခုပဲ ရှိမယ်။ အဲ့ဒါက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို နစ်နာဆုံးရှုံးမှု မရှိစေလိုသော အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်။ (ဒီအချက်ကတောင် အာဏာရှင်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေနဲ့ တိတိကျကျ ထွက်ရှိလာမှာမဟုတ်
၄ - ဧရာဝတီရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများသည် နိုင်ငံတော်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားတိုးတက်ရရှိရေးနှင့် စက်မှု
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်သင့်သော စီမံကိန်းများဖြစ်သော်လည်း မြစ်ဆုံ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သ
ဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သက်ရောက်မှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိမှုသည် အပြောများလာသော ကိစ္စဖြစ်နေ၍ မြစ်ဆုံ
စီမံကိန်းကိုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုရှိလျင်လည်း ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် အန္တရာယ်ရှိမှုနှင့်ပတ်သက်
၍ လုံးဝအန္တရာယ်မရှိပါဟု အာမခံနိုင်သော အဆင့်ဖြစ်သွားအောင် ဥပမာ တာတမံတည် ဆောက်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲတည်ဆောက်ခြင်း၊ တမံအမြင့်ကို နှိမ့်ချ၍ ရေသိုလှောင်မှု လျော့ချလျက် တည်ဆောက်ခြင်း၊ တမံ
နေရာကို ပြောင်းရွှေ့ပြီး အထက်ဘက်၌ နေရာရွေး၍ တည်ဆောက်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် နည်းလမ်းပြောင်း
လဲ စဉ်းစားသင့်ကြောင်းနှင့် ဒီဇိုင်းကိစ္စ ပြန်လည်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကိစ္စ ဆန်းစစ်လေ့လာ
ခြင်းပြုလုပ်နေချိန်တွင် စီမံကိန်းများကို ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းမပြုဘဲ မြစ်၏အထက်ဘက် မူလလျာထားသော စီ
မံကိန်းဖြစ်သည့် ချီဖွေစီမံကိန်းကို ဦးစွာလုပ်ဆောင်လျှင် ရ၊ မရ စဉ်းစားအကောင်အထည်ဖော်သင့်ကြောင်း အကြံပြုချက်သည် လျှော်ကန်သင့်မြတ်သော အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါသည်။
အရာရာတိုင်းမှာ Risks and Rewards ဆိုတာ ရှိတယ်။ လုံးဝ အန္တရာယ်မရှိပါဆိုတဲ့ အဆင့်ကို ဘယ်လို
အာမခံထားသလဲ။ တရုတ်က အာမခံပေးတာပဲလား ( အလွန်ရီစရာကောင်းတယ်)။ စီမံကိန်းများကိုရပ်
ဆိုင်းထားခြင်းမရှိပဲ ဘယ်လို လေ့လာမှုရလာဒ်မျိုးနဲ့ အကောင်အထည်ဆက်လက် ဖော်ဆောင်နေတာလဲ။ မသေဆေးဖော်တာစွမ်း ။ မစွမ်း သိချင်လို့ အရင်သတ်ပြစ်လိုက်တဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်.။
၅ - နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူအတွက် ရေရှည်အကျိုးရှိမည့် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကို မူဝါဒနှင့် အဆုံးအဖြတ်များချမှတ်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါတယ်။ ထို့အတူ ၀န်ကြီးဌာနက
လည်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တာဝန်ပေးအပ်မှုအရ ၄င်းစီမံကိန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ မူဝါဒ၊ အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ဥပဒေများနှင်အညီ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ရပါ
တယ်။ ယခုလည်း ၀န်ကြီးဌာန မှ ၄င်းအတိုင်းပင် နာခံဆောင်ရွက် လျှက်ရှိပါတယ်။ယခုအခါ ပြည်သူကရွေး
ချယ်ထားသော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လွှတ်တော်အသီးသီး ပေါ်ပေါက်လာပြီ
ဖြစ်သဖြင့် လွှတ်တော်၏ သဘောထား အဆုံးအဖြတ်၊ အစိုးရအဖွဲ့၏ မူဝါဒ အဆုံးအဖြတ်အတိုင်း ဥပဒေနှင့်
အညီ ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနသည် လွှတ်တော်နှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တာဝန်ပေးမှုဖြင့် ပြည်သူအကျိုးရှိစေမည့် လျှပ်
စစ်စီမံကိန်းများကို အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း..
ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်ဖော်နေခြင်းထက် စီမံကိန်း နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သတ်တဲ့ Contract Agreement မှ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အသီးသီးမှကျွမ်းကျင်သူမြန်မာအမျိုးသား
များမှ ထောက်ပြနိုင်ရန် ၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်လိုအပ်သည်။" ယုံကြည်ပါ " ဆိုသည့် စကားတစ်ခွန်းဖြင့်
ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်၍ မရနိုင်ပါ။
အချူပ်အားဖြင့် ဆိုသော် အဆိုပါစီမံကိန်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမည့် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်၊ ယဉ်ကျေးမှုအ
မွေအနှစ်များ၊ အပြင် စီမံကိန်းပြီးစီးပါက ထွက်ရှိလာမည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို တရုတ်က ၉၀ ရာခိုင်နှုံး၊ မြန်
မာက ၁၀ ရာခိုင်နှုံးသာရမည့် အပြင် ထိုရေကာတာကြီးအား နှစ် ၃၀ ကြာတရုတ်တို့ ကအပြည့် အ၀ ထိန်း
ချူပ်စီမံမှာမို့ ထိုနှစ်ကာလလွန်မြောက်ပြီး မြန်မာပြည်အား လွှဲအပ်ရမည့် အချိန်တွင် သုံးစားလို့ မရလောက်
အောင်ပင် ယိုယွင်းသွားနိုင်သည်မို့ အဘဆရာများလည်ချောင်းသွေးထွက်မတတ် အမြဲရွတ်ဆိုနေကြသည့် 
(ထုတ်ဝေသမျှ စာအုပ်၊ စာတမ်း၊ စာစောင်၊ ဂျာနယ်များတွင်မပျက်မကွက်ထည့် သွင်းရိုက်နှိပ်ခဲ့ ကြရသော)
နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဦးတည်ချက်များထဲမှ အပါအ၀င်ဖြစ်သည့် ....
အမျိူးဂုဏ် ၊ ဇာတိဂုဏ်မြင့်မားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ အမျိူးသားရေး လက္ခဏာများ မပျောက်
ပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဟူသည့် လူမှုရေး ဦးတည်ချက်....
နိုင်ငံတော် စီးပွားရေးတရပ်လုံးကို ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည် နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူတို့ ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိရေး ဟူသည့် စီးပွားရေး ဦးတည်ချက်....
ဟူသည့် အချက်အလက်များနှင့် ဖြောင့် ဖြောင့် ကြီးဆန့် ကျင်နေပါသဖြင် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားများ
Kyi Wah Htun ဖေ့ စ်ဘွတ်မှ ကူးယူကာဖြည့် စွက်ဖော်ပြပါသည်...
Posted by Unknown | at 4:36 AM | 13 comments
Coloured chicks: cute or cruel? Image source: STOMP ကြက်ကလေးတွေအရောင်စုံတယ်....
ပြောရယင်တော့ ရောင်စုံကြက်သားပေါက်ကလေးများ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ခေတ်စားနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်..
ကြက်ကလေးများအကောင်ပေါက်လာလျှင် အရောင်မျိူးစုံဖြစ်လာစေရန် သားဖောက်မည့် ကြက်ဥများအား
အဆိုပါကြက်သားပေါက်ကလေးများအား ချစ်စရာကစားစရာလေးများအဖြစ်၊ အိမ်မွေးအလှအဆင်တန်ဆာ
ကလေးများအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မော်ရိုကိုနိုင်ငံ၊ ယီမင်နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်
ပြည်ထောင်စုတို့ တွင်ပါ လမ်းများပေါ်တွင် လမ်းဘေးဈေးသည်များက ရောင်းချနေကြပါတယ်...
ကြက်ဥများအတွင်းထိုးထည့် သည့် ဆိုးဆေးများတွင် (ကြက်ပေါက်ကလေးများအားအဆိပ်အတောက်ဖြစ်
စေနိုင်သည့် ) ဟိုက်ဒြိုဂျင်ပါအောက်ဆိုဒ် နှင့် အမိုးနီးယား ဓါတ်များ ပါဝင်သောကြောင့် တိရိစ္ဆာန်များအား
ညှင်းပန်းနှိပ်စက်၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု မြောက်မမြောက် အငြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်လာနေပါတယ်...
အစားအသောက်များအားအရောင်ဆိုးခြင်းအား ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြကာ လူသားများအတွက် အန္တရယ်မရှိ
သော်လည်း သန္ဓေသားကြက်ပေါက်ကလေးများအတွက် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေကာ၊ သေဆုံးနိုင်ပါသေး
ကြက်ကလေးများအား အရောင်သွင်းခြင်းမှာ အမြဲတည်တံ့ နေသည်တော့ မဟုတ်ပါပေ...
ကြက်ပေါက်ကလေးများ ကြီးပြင်းလာသည်နှင့် အမျှ အတောင်အမွှေးအသစ်များက အရောင်ဆိုးထားသည့် 
အတောင်များအား အစားထိုးဝင်ရောက်ပေါက်လာသည်မို့ ပိုင်ရှင်များ၏စိတ်ဝင်စားမှု နည်းလာကာ စွန့် ပစ်
လူနဲ့ လူ့ ပါတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ကျင့် ဝတ်သိက္ခာစောင့် စည်းမှုမရှိတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ကိုယ်ကျိူးရှာအတ္တ
သမားတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ထဲက တစ်ခုပါပဲ...
ရွှေပြည်ကြီးမှာအခုမရောက်သေးပေမယ့် တစ်ချိန်တော့ ရောက်လာပြီး လုပ်စားကြဦးမှာအသေအချာပါပဲ...
In China, coloured chicks are the new black. Literally.
Chicken eggs are being injected with dye in order to produce multi-coloured chicks upon hatching.
They are then sold as toys or accessories by street vendors in China, India, Malaysia, Morocco, Yemen and even the United States.
Questions of animal cruelty have arisen asaresult, as dyes often comprise hydrogen peroxide and ammonia.
Food colouring could also have been used and while it is harmless on humans, it could cause intoxication and even death for the chicken embryos.
The colouring is not permanent either. As the hatchlings grow, new feathers will replace the coloured ones, causing them to lose their visual appeal and run the risk of being discarded by their owners.
Posted by Unknown | at 11:14 AM |2comments
Labels: news: asia one
Jesus statue vandalised with red paint draws stampede of worshippers
ပိုလန်နိုင်ငံမှ မဟုတ်တမ်းရားလုပ်ကြံဖန်တီးတတ်သူတစ်ချိူ့ ဟာ ယေရှုခရစ်တော်ရုပ်တုတစ်ခုအပေါ်တွင်
အနီရောင်ဆေးများ သုတ်လိမ်းသွားခဲ့ သည်ကို ခရစ်ယာန်ဘာသာယုံကြည်ကိုးကွယ်သူ အကြည်ညိုလွန်သူ
များက ခေတ်သစ် အံ့ ဖွယ်တန်ခိုးတော်အဖြစ်ခရစ်တော်၏ရုပ်တုမှသွေးများကျလာသည်ဟု ယုံကြည်ကာ အသည်းအသန်တိုးဝှေ့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းခဲ့ ကြသဖြင့် ထိုလူရှုတ်များအား ရဲများက လိုက်လံစုံစမ်းရှာဖွေ
ပိုလန်နိုင်ငံ၊ ပိုလန်ကာဒေသမှ ယုံကြည်သူများဟာ (ယေရှုခရစ်တော်) အရုပ်၏ ဦးခေါင်းထက်၊ ဦးရစ်သရဖူ
ဆူးချွန်များမှ အနီရောင်အရည်များ ယိုစီးကျလာသည်ကိုမြင်တွေ့ ကြရာတွင် အုပ်စုလိုက်အမြောက်အများ
ထိုအဖြစ်အပျက်အား အံ့ သြဖွယ်ရာတန်ခိုးတော်အဖြစ်ယုံကြည်ကြလျှက် ထိုဘာသာဝင်များဟာ ဘုရားရှိခိုး
ကျောင်းတွင် နေ့ ညမပြတ်စုရုံးစောင့် ကြပ်လျှက် ကက်သလစ်သာသနာအာဏာပိုင်များထံ တန်ခိုးတော်
သက်သေ၏အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပေးရန် ဆက်သွယ်တောင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း သွေးဟု၎င်းတို့ ထင်မှတ်ယုံကြည်နေကြသည့် ထိုအရည်များဟာ သုတ်ဆေးအနီရောင်များ
သာဖြစ်သည်ဟု ဘုန်းတော်ကြီးများကဆုံးဖြတ်မိန့် ကြားခဲ့ လိုက်သည်တွင် ၎င်းတို့ ၏ယုံကြည်ချက်များအား
" ကျွန်ုပ်တို့ အသေအချာစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ ကြရာမှာတော့ အဲဒါဟာ သွေးမဟုတ်ပဲ သင်္ဘောဆေး ( သုတ်
ဆေး ) များသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုံး၊ အသေအချာပြောနိုင်ါပတယ်...
ဒါဟာ နောက်ပြောင်လိုသူလူရှုတ်တစ်ချိူ့ ရဲ့ လက်ချက်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်..." လို့ဒေသခံဘုန်းတော်
ကြီး ဂျန်ကုတီနာ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
" ( သူတစ်ပါးရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို ) အခုလိုပျက်ရည်ပြု၊ ရယ်စရာလုပ်တဲ့ လူဟာ တော်တော်စိတ်ဓါတ်
ဆိုးသွမ်းတဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်...သူတို့ ဟာ ဘုရားသခင်ဆုံးဖြတ်တော်မူတဲ့ အခါကျမှ ဒုက္ခတွေ့ ပြီးနောင်တရ
ကြမှာပါ...." လို့ ယုံကြည်သူတစ်ဦးကဆိုပါတယ်...
သို့ သော်လည်း ထိုလူရှုတ်လူပွေများဟာ ယခုဘ၀မှာတင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ရုပ်တုအား ဖျက်လိုဖျက်ဆီး
လုပ်မှုဖြင့် ထောင်ဒါဏ်သုံးနှစ်အထိ အပြစ်ပေးခံရနိုင်တယ်လို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အထူးအဆန်းဆို ဖြစ်နိုင်၏၊မဖြစ်နိုင်၏မစဉ်းစားပဲ မျက်စေ့ မှိတ်ယုံတတ်ကြတဲ့ ရွှေပြည်ကြီးမှသူများလည်း
သမိုင်းဝင်၊ ဂမ္ဘီရ ၊ မျက်ရှင်၊ ပြုံးတော်မူရုပ်ထု စသည်ဖြင့် စိတ်ထင်ရာယုံကြည်တတ်သူများအတွက် ယခုလို
လူနောက်လူပြောင်များနှင့် တွေတတ်သည့်အပြင် လုပ်စားဘိုးတော်၊ ရသေ့ ၊ အဘများနှင့်တွေ့ ပြီး စီးပွား
ပျက်၊ ဘ၀ပျက် ခဲ့ ရတတ်တာတွေ သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါစေသော်...
Hoaxers who poured red paint overastatue of Jesus are being hunted by police after sparkingastampede of worshippers who declared the 'blood' to beamodern miracle. Church goers in Polanka, Poland, had been leaving after mass when they sawared liquid dripped from the crown of thorns on the statue's head.
Believing it to beamiracle, they set upavigil outside the church and contacted Catholic authorities to authenticate the holiness of the evidence. But their faith was shaken when priests declared the blood was nothing more sacred than red paint.
Local priest Jan Kutyna said: "We carried out tests and with 100% certainty we can say this is not blood, it is paint. It was clearly the work of some jokers."
One worshipper added: "What kind of sick mind playsajoke like this. They will regret this when they're being judged by the holy man then defaced." But police say the hoaxers now faceamore immediate punishment on earth - three years' jail for vandalisingareligious statue.
Posted by Unknown | at 11:16 AM |2comments
Labels: news; austriantimes
ထိုင်းနိုင်ငံမှ လှတစ်မျက်နှာ၊ ယဉ်တစ်ကိုယ်လုံးလှစေမည့် နည်းဆန်း....
( ထိုင်းနိုင်ငံမှ ) အစိုးရခွင့် ပြုချက်ရ ခမ်မစ်ကာနဆွန်ခလာ ရဲ့ ပျိူမေတို့ လှသည်ထက်လှမယ်ဆိုယင် အလှ
ပြုပြင်ရေးနည်းစနစ်သစ်ကတော့ရင်သားအလှထင်ရှားပြစေချင်သူတွေအတွက် ဆီလီကွန်မသုံး၊ ဆေးထိုး
စရာမလိုစေတဲ့ နည်းအနေနဲ့ နာနာရိုက်ကာ လက်ယောင်လိုက်စေတဲ့ နည်းနဲ့ အသုံးပြုပေးနေပါတယ်...
ရင်သားတင်မက နောက်ပိုင်းအလှ၊ မြင်သမျှလှည့်ကြည့် စေချင်ယင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်း ရိုက်ကာ၊နှက်
ကာဖြင့် သဘာဝအလိုကျ ကြီးထွားစေပါတယ်....
သူ့ လိုလက်ယောင်လိုက်ပြီးကြီးအောင်လုပ်တာကတော့ ... အစ်ကိုကာလသားများလည်း
တတ်နိုင်ကြပါပေတယ်ဗျာ...ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး သူ့ ဆီသွားပြီးအရိုက်ခံနေစရာမလိုပါဘူး..
အလှအပအတွက် ရိုက်နှက်စေခြင်းဖြင့်အသက် ၄၄ နှစ်ရှိ ခွန်ရင်တော့ဘ်နွမ်းရဲ့ အလှပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်း
ဟာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါးကြာမြင့် ခဲ့ တာတောင်မှ နာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားလျှက်ရှိနေပါတယ်...
ထိုအလှပြုပြင်နည်းကိုသူမဆီမှာသင်တန်းတက်ချင်လို့ လျှောက်ထားသူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ရှိတဲ့ အနက်မှ
လောလောဆယ်တော့ ၎ ယောက်ပဲသင်ပေးဖို့ ရွေးထားပါတယ်တဲ့ ...
သူမအနေနဲ့ လက်ရင်းတပည့် ပေါင်း ၁၀ သာရွေးချယ်သင်ကြားပေးဖို့ သာရည်ရွယ်ပါတယ်...အလွန်တရာ
မှ လျှိူ့ ဝှက်ရှားပါးတဲ့ ပညာရပ်မို့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ သူမတစ်ဦးတည်းသာ ဤပညာရပ်ကိုတတ်မြောက်ထား
တာမို့ လှတစ်မျက်နှာယဉ်ကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးအလှ ( ရိုက်နှက်နည်း ) သင်တန်းခက ဘတ်ငွေ ၁၀ သန်း
( ဒေါ်လာ ၃သိန်း၃ သောင်းနီးပါး ) ၊ ရင်သားသီးသန့် တောင့် တင်းခိုင်မာ၊ လှပကြီးထွားစေမည့် နည်းပညာ
သင်တန်းခက ဘတ်ငွေ ၈ သန်း၊ ပါးနားရိုက်ကာ မျက်နှာလှလှ၊ ခင်ပပ ဖြစ်စေမည့် သင်တန်းကြေးကတော့
ဘတ်ငွေ ၅ သန်းပါတဲ့ ဗျာ....
<iframe src="http://www.bangkokpost.com/multimedia/vdo/256935/breast-slapping-beauty/embed" width="635px" height="385px" scrolling="no" frameborder="0" ></iframe>
Khemmikka Na Songkhla's government-approved alternative beauty techniques include "breast-slapping"to enhance breast size and "buttock-slapping" to firm up the rear.
After almost two decades of dishing out slaps in the name of image improvement, the techniques of the 44-year-old beautician better known as "Khunying Tobnom" are as popular as ever.
Incidentally, 10 million Baht equates to almost £210,000 ($330,000).
Posted by Unknown | at 10:54 AM | 1 comments
Labels: news: bangkok post
အရပ်အမောင်းမြင့် မားတာကသံသယရှိစရာမလိုပါ...ရုပ်ရည်ချောမောပြီး ကိုယ်ခန္ဓာအချိူးအစားကလည်း
ထုဆစ်ထားသလို တောင့် တင်းခိုင်မာကြံ့ ခိုင်တာကလည်း အသေအချာပါပဲ...
ဒါပေမယ့် ( အရပ်စကားနဲ့ ပြောရယင် ) စိတ်ကထောင်းကနဲဆိုယင် ဗိုက်နာတာကအရင် လို့ လည်းဆိုနိုင်
အဆိုပါဇတ်ကောင်ဖန်တီးသူ နာမည်ကျော်စာရေးဆရာမ ဆူဇန်အန်ဒါဆင် တစ်ယောက် အသစ်ရေးသား
ထုတ်ဝေသည့်"မိန်းကလေး ..ကိုယ်ဟာမင်းရဲ့ အလိုကျပါပဲ" ဟူသည့် ဇတ်လမ်း၏ အွန်လိုင်းအီးဘွတ်ခ် ပုံ
နှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွင် ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပင် စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှားယွင်းခဲ့ သည်ကိုမြင်တွေ့ ခဲ့ 
လိုက်ရသဖြင့် အံ့ သြတုန်လှုပ်သွားခဲ့ ရပါတယ်....
အဆိုပါစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံမှားယွင်းမှုကြောင့် သူမဖန်တီးခဲ့ သည့် ရင်သိမ့် တုန်ဇတ်လမ်းခမျာ ထိုအမျိူးအ
စားမှ လျောကျခဲ့ ရပါတော့ တယ်...
အကြမ်းအရမ်း ...ရင်သိမ့် တုန်ဇတ်ကြမ်း...မှသည် သတ်ပုံမှားတဲ့ ညကြောင့် 
အကြမ်းအပန်း...မောင်ပြေးစမ်း ဖြစ်ခဲ့ ရလေပြီ...
" ကျွန်မရဲ့ ဝတ္တုစာအုပ် ( အီးလ်ဘွတ် ) အားဝယ်ယူအားပေးသူများအား ခွင့် လွှတ်ပါစေကြောင်းတောင်းပန်
စာမျက်နှာ ၂၉၃ တွင် ဖော်ပြထားသည့်ထိုတဒင်္ဂအခိုက် သူ့ တစ်ကိုယ်လုံးတောင့် တင်းမှင်သက်မိသွား
လေသည်...သို့ သော် သူကြမ်းပေါ်တွင် (မအောင့် နိုင်တော့ ပဲ ) ၀မ်းသွားခဲ့ လိုက်သဖြင့် သူထိမ်းချူပ်ထား
သမျှလျော့ ချလိုက်သည်ကို သူမအနေဖြင့် ခံစားသိရှိလိုက်ရလေသည်...(ဟုမှားယွင်းစွာ စာရိုက်ထားခဲ့ မိ
ပါသည်) " ဟုသူမကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
"ဇတ်လမ်းအရ သူဟာသူမကို ကြမ်းပေါ်သို့ ပွေ့ ယူချထားလဲလျောင်းစေလိုက်ကာ ထို့ နောက်တွင်တော့ ..
ကျွန်မဖြင့် အဲဒီစာကြောင်းဖတ်ပြီး စာဖတ်သူတွေဖက်ကတွေးကာရှက်ရွံ့ အားငယ်ထိတ်လန့် မိပါတယ်...
ကျွန်မကတော့ ဒီအမှားဟာ အီးဘွတ်ပုံနှိပ်စာမှာပဲပါရှိလိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့် မိပါတယ်..သို့ သော်လည်းစာ
ဖတ်သူများဝယ်ယူထားသည့် စာအုပ်များတွင် ပါရှိပါကအကြောင်းကြားစေလိုပါတယ်...ကျွန်မအနေနှင့် စာ
၎င်းအနေနှင့် ထိုအမှားကို အလျင်အမြန်ပင် ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်လိမ့် မည်ဟုမျှော်လင့် ဆုတောင်းပါတယ်..."
ဟု သူမကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဒါကြောင့် မို့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ အလွန်အရေးကြီးတယ်လို့ ဆရာ့ ဆရာများဆိုခဲ့ ကြတာကိုး...
အခုတော့ ကြည့် ပါလေ...အလွန်အင်မတန် ရင်သိမ့် တုန်ဖြစ်၇မယ့် အခန်းကျမှ စာရိုက်မှား၊ စာလုံးပေါင်း
သတ်ပုံလေးတစ်ခုမှားတာကြောင့် နှာခေါင်းပိတ်ကာ ရေဆေးရမယ့် အဖြစ်ရောက်ရရှာတယ်...
Posted by Unknown | at 10:40 AM | 1 comments
Labels: news: guardian.co.uk
မိမိတို့ အမှန်တစ်ကယ်စားသုံးနိုင်သည်ထက် (အများအပြား) ပိုမိုမှာယူသည့် လာရောက်စားသုံးသည့် အား
ပေးသူဧည့်သည်များအား အပိုဒါဏ်ကြေးထပ်မံကောက်ခံသည့် စနစ်တစ်ခုကို ဆော်ဒီနိုင်ငံမှ စားသောက်
ဆိုင်တစ်ခုက စတင်ကျင့် သုံးခဲ့ ပါတယ်...
ဆော်ဒီနိုင်ငံအရှေ့ ပိုင်းဒေသရှိ ဒမ်မန်မြို့ မှစားသောက်ဆိုင်၏ မကုန်နိုင်မခမ်းနိုင်မှာကြားပြီး ထားပစ်ခဲ့ ကာ
အလဟဿ သွန်ပစ်လိုက်ရခြင်းများအား ထိန်းချူပ်သည့် ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အစားအသောက်များအ
ကြောင်းမဲ့ စွန့် ပစ်ရခြင်းနှင့် ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာမှာကြားကာဖြုန်းတီးပစ်ရခြင်းများအား တားဆီးနိုင်ရန်အ
တွက် ချင့် ချိန်မှာယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဖာဟက်အယ်လ်အနက်ဇီ က
မကုန်နိုင်မခမ်းနိုင်မှာကြားပြီး သွန်ပစ်ရတာကတော့ နှမြောဖို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်...
မိမိတို့ ကငွေကြေးတတ်နိုင်လို့ ဘာမှမဖြစ်သော်လည်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ စားနပ်ရိက္ခာမဖူလုံလို့ 
အငတ်ဘေးကြုံတွေ့ နေရသူပေါင်း သန်းနဲ့ ချီရှိနေတာကို သတိပြုမိသင့် ပါတယ်...
" ၎င်းတို့ ရဲ့ အဆင့် အတန်းဂုဏ်သိက္ခာမြင့် မား၊ ပလွှား၊ ကြွားဝါလိုတာကြောင့် ဆိုင်အတွင်းရှိတစ်ခြားလာ
ရောက်စားသုံးသူများ အထင်ကြီးစေရန် ပိုမိုမှာယူလေ့ ရှိသည့် ဖောက်သည်စားသုံးသူများ အများအပြားရှိပါ
တယ်..." ဟု ၎င်း(ဆိုင်ပိုင်ရှင်) ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ယခုကဲ့ သို့ ဒါဏ်ရိုက်ခြင်းအစီအစဉ်ဟာ အတ္တကြီးကြီး၊ လောဘကြီးကြီးဖြင့် မိမိတို့ စားသုံးနိုင်တာထက်ပိုပြီး
မှာကြားကာ ကျန်ရစ်ခဲ့ သည့် အစားအသောက်ပမာဏအပေါ်လိုက်၍ သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်.....
ယခင်ကမရှိခဲ့ ဖူးသည့် အစီအစဉ်သစ်အားစိတ်ကူးအကောင်အထည်ဖေါ်မှုအား ဆော်ဒီနိုင်ငံသားအများစု
က အားပေးထောက်ခံခဲ့ ကြပါတယ်လို့ လည်း အယ်လ်အနက်ဇီ ကဆိုပါတယ်...
ဆော်ဒီလို ရေနံသူဌေးတွေနေတဲ့ နိုင်ငံကတော့ အခုလိုအစားအသောက်တွေဘုံးပေါလအောစွန့် ပစ်နေ
လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါပဲ...
A Saudi restaurant has started charging diners if they order more than they can eat.
The move against leftovers by Marmar Restaurant in the city of Dammam in the Eastern Province is aimed at stopping food wastage and reduce extravagance by rationalising orders, said Fahad Al Anezi, the restaurant owner.
The fine is symbolic for diners whose eyes or egos are bigger than their stomachs and is decided according to the quantity of the leftovers. The unprecedented idea has been largesly endorsed by Saudis, Al Anezi said.
Posted by Unknown | at 7:27 PM |2comments
Labels: news: gulf news
ဆိတ်တစ်ကောင်အား မဖွယ်မရာအဓမ္မပြုကျင့် မှုဖြင့် ဂါရမ်ကူဝါ တရားရုံးတွင် အမျိူးသားတစ်ဦးအား ရုံး
ထုတ်စွဲဆိုခဲ့ တယ်လို့ အနောက်မြောက်ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ကဆိုပါတယ်...
အသက် ၄၁ နှစ်အရွယ်ရှိ ဇာချာရီယာတီဗာနီ ဟာ လာမည့်သြဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းအထိ အချူပ်ထဲ
တွင်နေရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ကယ်လီဘိုဂီလ်မွိုင်လိုအာ ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်...
ဆိတ်ကိုပြစ်မှား စိတ်ကစားမိတော့ ဆိတ်မှာ စိတ်အားငယ်ရသည်....
တီဗာနီ အားလွန်ခဲ့ သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ ပြီး တိရိစ္ဆာများအား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု
ဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်ရှိ၎င်း၏ဇနီးနှင့် ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်ရှိ သားဖြစ်သူတို့ ဟာ ကလစ်ပန်း ဒေသအနီး
ရှိ မာဒီဒီ ကျေးရွာမှနေအိမ်တွင် ဆိတ်တစ်ကောင် အော်ဟစ်မြည်သံအားကြားခဲ့ ကြရပြီးနောက် အကြောင်း
ရင်းအား သွားရောက်လေ့ လာကြည့် ရှုခဲ့ ပါတယ်...
၎င်းတို့ ဟာ တိရိစ္ဆာအား အဓမ္မမုဒိန်းမှုပြုကျင့် နေသည့် တီဗာနီ အားတွေ့ ရှိခဲ့ ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
ဇနီးဖြစ်သူက ရဲတပ်ဖွဲ့ အားအကြောင်းကြားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
တိရိစ္ဆာန်နဲ့ မှ မေထုန်အမှုပြုတာဆိုတော့ လိင်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ကစဉ့် ကလျားဖြစ်မှုလို့ ဆိုယင်ရနိုင်မလားပဲ..
A man appeared in the Ga-Rankuwa Magistrate's Court for allegedly raping his goat, North West police said.
Zacharia Tivane (41) would remain in custody until his next appearance on 21 October, Sergeant Kelebogile Moiloa said.
Tivane was arrested on Sunday morning and charged with bestiality.
His 48-year-old wife and teenage son heard the goat screaming, at their home in Madidi village near Klippan, and went to investigate. They allegedly saw Tivane raping the animal. The woman called the police
Posted by Unknown | at 3:48 AM | 1 comments
Labels: news: iafrica.com
နွားခိုးတဲ့ လက် ဖြတ်စေ...
နွားတစ်ကောင်ခိုးယူခဲ့ ကြသည့် လူငယ်နှစ်ဦးအား ၎င်းတို့ ၏ညာဖက်လက်များအားဖြတ်ပစ်စေရန်နိုင်ဂျီးရီး
ယားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဇမ်ဖာရာပြည်နယ်မှ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာတရားရုံးတစ်ခုမှ ပြစ်ဒါဏ်အဖြစ်စီ
အများပြည်သူမြင်ကွင်းရှေ့ တွင် အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်ရှိ အဘူဘာကာ နှင့်၂၂ နှစ်အရွယ်ရှိ လာဝါလ်လီ
မူဆာတို့ ရဲ့ လက်များအား လက်ကောက်ဝတ်မှနေ၍ဖြတ်ပစ်ရမည်ဟု တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ တာ
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ်မစ်ဥပဒေအရ လက်ဖြတ်ခြင်းမျိူးမှာ ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲဖြစ်ပြီး အဆိုပါလူ
ငယ်များဟာလည်း ပြစ်ဒါဏ်စီရင်ချက်နှင့် ပါတ်သက်ပြီး ရုံးတော်တွင် အယူခံဝင်နိုင်တယ်လို့ တရားရုံးကဆို
နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရက မွတ်ဆလင်အများစုနေထိုင်သည့် နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ပြည်နယ် ၁၂ ခုတွင် အစ္စလာမ်
ဘာသာရေးဆိုင်ရာဥပဒေများအား အသိအမှတ်ပြု ( ကျင့်သုံးခွင့် ပြု ) ထားပါတယ်...
လူကယူတာမဟုတ်ဘူး...လက်ကယူတာ ...ဒါကြောင့် လက်ဖြတ်စေ...
နက်ဆာရာဝမ်မေလ်လာယီ ရွာတွင်ကြားနာခဲ့ သည့် အမှုအခင်းတွင် တရားသူကြီး မူဟမ္မာဒူအဘူဘာကာ
က တရားခံများဖြစ်ကြသည့် အဘူဘာကာနှင့် မူဆာတို့ ဟာ ဒေသခံတစ်ဦးထံမှ အဆိုပါနွားထီးအား ခိုးယူ
ခဲ့ ကြောင်း၊ အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
" တစ်ပါးသူနေအိမ်ခြံဝန်းအတွင်းသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ကာ နွားတစ်ကောင်အား ခိုးယူခဲ့ ကာ အပြစ်ရှိ
ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ ကြသည့် အတွက် ဥပဒေအရ လက်ဖြတ်နိုင်သည်ဟုဆိုထားသောကြောင့် သင်တို့ နှစ်ဦး
၏လက်များအား လက်ကောက်ဝတ်မှနေ၍ ဖြတ်ပစ်ရန် ကျွန်ုပ် အမိန့် ချမှတ်လိုက်သည်..." ဟု တရားသူ
ကြီးမင်း မူဟမ္မာဒူ အဘူဘာကာ ကပြစ်မှုကျူးလွန်သူတရားခံများအားပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
၎င်းတို့ ခိုးယူခဲ့ သည့် နွားထီးကြီးမှာ ဒေါ်လာ ၈၆၇ ခန့် တန်ဖိုးရှိသည်ဟု သတင်းများကဆိုပါတယ်...
အဆိုပါပြစ်ဒါဏ်အားအများပြည်သူများမြင်တွေ့ နိုင်စေရန် ဈေးနေ့ ဖြစ်သည့် အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်နေ့ 
တွင် စီရင်မည်ဖြစ်သည် ဟုတရားသူကြီးမှပြောကြားခဲ့ သော်လည်း တရားခံများအနေဖြင့် အယူခံဝင်နိုင်ပါ
သေးတယ်လို့ တရားသူကြီး အဘူဘာကာက ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
နွားကိုဆွဲယူတာ လက်ကဆိုတော့ လက်ကိုဖြတ်တယ်ဆိုယင် မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ယင်ရော ဘာကိုဖြတ်မှာ
Amputations under Islamic law are rare in Nigeria and the court said the men could appeal against their sentences. Nigeria's government recognises aspects of Islamic law in its 12 mainly Muslim northern states.
Posted by Unknown | at 2:18 AM |0comments
သူကလေးရဲ့ အစွမ်းကတော့ အံ့ မခန်းပါပဲ...
( practice makes perfect ဆိုတဲ့ စကားဘယ်လောက်မှန်သလဲဆိုတာ သက်သေပါပဲ...)
သူကလေးကတော့ ဘောနဲ့ ပတ်သက်လာယင် သူ့ ထက်တတ်တဲ့ သူ၊ ကျွမ်းတဲ့ သူမရှိပါဘူးလို့ မပြောပါ
Posted by Unknown | at 10:16 AM | 1 comments
Labels: video clip : youtube
77-year-old woman kneels naked outside courthouse to protest at unjust land grab
တရုတ်ပြည်မှ အသက် ၇၇ နှစ်အရွယ်ဆရာဝန်မကြီး၏အံ့ မခန်းဆန္ဒပြချက်...
သူမ၏နေအိမ်အဖျက်ခံလိုက်ရသည့်အတွက် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေခဲ့ သည့် တရုတ်နိုင်ငံမှ အသက် ၇၇
နှစ်အရွယ်ရှိ ဆရာဝန်မကြီး ကျွမ်းကျင်ဟွေး ဟာ တရားမျှတမှုကိုအလွန်အမင်းလိုလားသည့် အတွက် လွန်
ခဲ့ သည့်သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့ က ရှန်ဟိုင်းမြို့ ရှိ တရားရုံးရှေ့ တစ်ခုတွင် အ၀တ်မပါ ကိုယ်ဗလာဖြင့် ဒူး
ထောက်ကာ တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒပြခဲ့ ပါတယ်...
တရုတ်နိုင်ငံတွင်မြို့ ပြစီမံကိန်းများ အကြီးအကျယ်ဖော်ဆောင်လာတာမို့ အိုအိမ်များအတင်းအကြပ်ရွေ့ 
ပြောင်းစေမှုများ မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ ရှိပါတယ်...
အစိုးရအာဏာပိုင်များ၊ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီကြီးများဟာမပြောင်းရွေ့ မှီ ရက်အနည်းငယ်သာကြိုတင်အကြောင်း
ကာ အိမ်ပိုင်ရှင်များအား မောင်းထုတ်ရွေ့ ပြောင်းစေတတ်တာမို့ ပြည်သူအများ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့ ကြရ
၎င်းတို့ ပေးသည့် နစ်နာကြေးများဟာလည်း လက်ရှိပေါက်ဈေးထက်များစွာလျော့ နည်းနေလေ့ ရှိပါတယ်..
ဒီသတင်းလေးဖတ်မိလို့ လွန်ခဲ့ သည့် ၂၀၀၂ ခုနှစ်လောက်က ကိုပီတာတစ်ယောက် ရှန်ဟိုင်းမြို့ ကိုရောက်
ခဲ့ စဉ် တရုတ်တွေလမ်းတစ်ခုကိုပိတ်ပြီးဆန္ဒပြနေတာနဲ့ ကြုံခဲ့ ဖူးတာလေးအမှတ်ရမိပါတယ်...
ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူးတာက ကွန်မြူနစ်တရုတ်ပြည်မှာ ဆန္ဒပြယင် အစိုးရကရက်ရက်စက်စက်နှိပ်ကွပ်လေ့ ရှိတာ
မို့ ဆန္ဒပြမှုတွေမရှိဘူးလို့ ဆိုတာပါပဲ...
ဒါပေမယ့် မိမိတို့ ရဲ့ အိုးအိမ်တွေဆုံးရှုံးနစ်နာရမှာ အမှန်ဆိုတော့ တရုတ်တွေလည်း ထောင်မကြောက်၊တန်း
မကြောက်၊ သေမှာမကြောက်နိုင်တော့ ပဲဆန္ဒပြတော့ တာပါပဲ...
ထိုစဉ်တုံးကလည်း အဆိုပါဆန္ဒပြသူများဟာ ရှန်းဟိုင်းမြို့ လယ်နှင့် နီးသည့် ၎င်းတို့ ရပ်ကွက်အားနစ်နာ
ကြေးအနည်းငယ်သာပေးပြီး အတင်းအဓမ္မရွေ့ ပြောင်းခိုင်းလို့ ဆန္ဒပြကြတာလို့ ကြားသိခဲ့ ရပါတယ်...
ကွန်မြူနစ်တွေအုပ်ချူပ်လို့ ဘာသာတရားမရှိတဲ့ ( တရုတ်ပြည်သားအများစု၊ အထူးသဖြင့် ၃၀ ကျော်၊၄၀
အရွယ်တွေပါ...) တရုတ်တွေဟာ အစိုးရရော၊ ပြည်သူတွေပါ အရှက်အကြောက်မရှိကြတာကတော့ အ
ယခုလိုမျိူးပညာတတ်အမျိူးသမီး (ဆရာဝန်မ) တစ်ယောက် အ၀တ်ဗလာနဲ့ လူမြင်ကွင်းမှာဆန္ဒပြဖို့ ဆိုတာ
မြန်မာပြည်မှာတော့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ...( တစ်ခါမှလည်းမကြားခဲ့ ဖူးပါဘူး...)
ဗီဒီယိုကလစ်ပါပုံများအမြင်မတော်ယင်တော့ ခွင့် လွှတ်ကြပါခင်ဗျာ...
သတင်းအပြည့် အစုံကတော့ ဒီမှာပါ...
Desperate for justice, 77-year old Zhuang Jinghui,aformer doctor, knelt naked in front ofaShanghai courthouse on August 18 to protest the demolition of her home.
Asaresult of massive urban renewal programmes, forced evictions are frequent in China. These have infuriated home owners, who are often given onlyafew days’ notice before being thrown out of their homes. The so-called compensation is also far below the market rate.
Posted by Unknown | at 10:26 AM | 1 comments
Labels: news: france 24.com
ရွှေပြည်ကြီးမှ ၂၁ ရာစုရဲ့ မဟာပညာကျော်ဝန်မင်းတစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ထွက်စကားများကားအံ့ သြကုန်နိုင်
"ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အခုမဂ္ဂါဝပ် ၁၅၀၀ ပေးတာတောင် ကုန်အောင် မသုံးနိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဘယ်သူက သုံးမှာလဲ။ သုံးစရာမရှိရင် market ရဲ့သဘောအရ ရောင်းစားရမှာပေါ့။ သုံးစရာမရှိရင် ရောင်းစားရမယ်။"
(အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း)
ကျွန်တော်တို့ ဒါလေးကို သိအောင်ဆိုပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လ ၉ ရက်နေ့က ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်ရေးပြီး
တော့ သတင်းစာမှာ ထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ကျွန်တော်ပဲ တည်းဖြတ်ပြီး ကျွန်တော်ပဲရေးပြီး ကျွန်တော်ပဲ ထည့်ခိုင်းလိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါးပြီးတဲ့နောက် သိပ်ရက်မကြာဘူးသတင်းစာရှင်းလင်း
ပွဲ လုပ်ပါတယ်။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမလုပ်ခင်မှာ ဂျာနယ်တစ်စောင်က ဘာရေးလဲဆိုတော့ ဒီဆောင်းပါး
ရေးတဲ့ကောင် ဘယ်လောက်တတ်လို့လဲ၊ ဒီကောင်က ဘာအဆင့်ရှိလဲဆိုတော့၊ ကျွန်တော်မပြောတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုတာက ဂက်စ်တာဘိုင်လို ဂက်စ်ထည့်ရတာ၊ ဒီဇယ်တာဘိုင်လို ဒီဇယ်ထည့်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ရေထည့်မောင်းရတာ။
ညွှန်ချုပ် မင်းရေးတယ်ပြောလိုက်၊ ငါရေးတယ်မပြောနဲ့။ ငါ့ထက်ပိုပြီးတော့ သိနိုင်တဲ့လူ မရှိတော့ဘူး။မြန်မာ
နိုင်ငံမှာတော့ ရေအားလျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ထက် ပိုပြီးတော့ အတွေ့အ
ကြုံရှိတဲ့လူ မရှိတော့ဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ မင်းပဲရေးတယ်ပြောလိုက်၊ ငါရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် မကောင်းဘူးဖြစ်
သွားမယ်။ အမှန်ကတော့ ကျွန်တော်ပဲ ရေးလိုက်တာ။ ဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေ၊ ကျွန်တော် အသာလေးဖြေနိုင်ပါတယ်။
( ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကမှ ထိုလျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးအဖြစ်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သည့် )
မဟာပညှာယှိဝံမင်းရဲ့ မှတ်သားဖွယ်ရာစကားများဖတ်ပြီး အမှန်တကယ်လက်ရှိအခြေအနေကိုဖော်ညွှန်း
ထားတဲ့ အလဲဗင်းမီဒီယာဥက္ကဌ ( CEO ) ( အမှူဆောင်အရာရှိချူပ် ) ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်ရဲ့ စကား
ဧရာဝတီမြစ်ဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းဝင်မြစ်ကို လက်ညှိုးထိုးရောင်းစားခံနေရတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခြေအနေ၊ ကြွေးတင်ကျွန်ဖြစ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့ နှစ် ၂၀ အတွင်း မရိုးတဲ့ စကားပုံပါ။ ၁၉၉၅ ၀န်းကျင်က အတိုးမဲ့ချေးငွေဆိုပြီး ၀ယ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်သကြားစက်တွေ အခုဘာဖြစ်နေပြီလဲ။ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ပေးရတဲ့ ဒီစက်ရုံတွေလိုပဲ တရုတ်ရဲ့အတိုးမဲ့ချေးငွေအားလုံးဟာ တန်ဖိုးတစ်ဝက်သာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ စက်ရုံအစုတ်တွေကို ဒီမှာလာဆင်ပြီး ရောင်းတာပါ။ ဘယ်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတွေမှာမှ မရှိတဲ့ ပွဲခကို တရားဝင်ပေးပြီး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ ကိုလာဘ်ထိုးတာ၊ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ တရုတ်အစိုးရရဲ့ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရနေသလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ပွဲခ(သို့) တရားဝင်လာဘ် ငွေဟာ project တွေ ချေးငွေတွေရဲ့ ၂၀% နီးပါးအထိ ရှိနေတော့ ဒီတိုင်းပြည်မှမမွဲရင် ဘယ်တိုင်းပြည်မွဲပြီး ကျွန်ဖြစ်မှာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတ ၆၀%ကို တရားဝင်(သို့) တရားမ၀င်နည်းနဲ့ တူးဖော်သုံးစွဲခွင့် ရနေတာက တရုတ်နိုင်ငံပါ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက လေဆိပ်မှန်သမျှ၊ ဆိပ်ကမ်းအတော်များများကို လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရတဲ့ ကုမ္ပဏီက တရုတ်အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ကုမ္ပဏီ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အ၀င်အထွက်သတင်းတွေကို တရုတ်အစိုးရ ရတာမထူးဆန်းသလို၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အပ်ကျတာကအစ တရုတ်တွေသိနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ပြဿနာပေါ်လာတိုင်း တရုတ်အစိုးရ ရောက်ရောက်လာတာ။ အစကတော့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့်လို့ ထင်ရပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံ ပြေလည်နိုင်ပြီဆိုရင် သူတို့ မြှောက်ပေးတတ်တဲ့ သတင်းတွေကြောင့် နှစ်ပေါင်း ၂၀ အတွင်းမှာ တရုတ်အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံရေးကို ထင်သလိုချယ်လှယ်နေသလားလို့တောင် စဉ်းစားစရာရှိပါတယ်။ အရှင်းဆုံးပြောရရင် တရုတ်အစိုးရဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို satellite state တစ်ခုအဖြစ် မဟာဗျူဟာမြောက် ထားရှိပြီး မဟာဗျူဟာ မြောက်မဟာမိတ်လို့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ခရီးမှာ သုံးနှုံးခဲ့တာ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရမ်းစိုးရိမ်စရာပါပဲ။ အဲဒီခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့တဲ့ သမ္မတဟူကျင်တောင်ရဲ့ မျက်နှာပေး၊ ဆက်ဆံပုံက ကျွန်တော့်ရင်ကို နာကျင်စေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ . . . . .
ကျွန်တော့်သွေးတွေ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော်ကလို ဆူပွက်လာခဲ့တယ်။ အမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အရာတွေအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအတွင်းကို ၀င်ရောက်ဖို့ အစိုးရရော၊ အတိုက်အခံကိုပါ ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုက်တယ်။ ဒီနှစ်အတွင်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အပြောင်းအလဲမဖြစ်ခဲ့ရင်၊ တံခါးတွေဖွင့်မထားခဲ့ရင်၊ ကျွန်တော်တို့ မညီညွတ်ခဲ့ရင် ကျွန်တော်တို့ ကျွန်ဖြစ်တော့မယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို ကာကွယ်ဖို့၊ ကျွန်တော်တို့သမိုင်းကို ကာကွယ်ဖို့ ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ကာကွယ်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ညီညွတ်မှရတော့မယ်။
Posted by Unknown | at 10:45 AM |3comments
အမေမရှိလို့ နွားမကြီးထံမှ နို့ စို့ နေရသည့် ကမ္ဗောဒီယားမှကလေးငယ်...
ကမ္ဗောဒီးယားနိုင်ငံမှ အမျိူးသားကြီးတစ်ဦးက ၎င်းရဲ့ မြေးကလေးဟာ နွားကလေးကနွားမကြီးထံမှ နို့ စို့ နေ
သည်ကိုတွေ့ ရှိခဲ့ ပြီး အတုယူကာ နွားမတစ်ကောင်ထံမှ တိုက်ရိုက်နို့ စို့ ခဲ့ ကာ အသက်ရှင်နေခဲ့ ရပါတယ်
လို့ ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၁ နှစ်နှင့် ၈ လအရွယ်ရှိ မြေးဖြစ်သူ သာဆိုဖက် ကလေးဟာ ၎င်း၏မိဘနှစ်ပါးစလုံးကျေးလက်ဒေ
သကိုစွန့် ကာ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေဖို့ လွန်ခဲ့ သည့် ဂျူလိုင်လ ကထွက်ခွာသွားကတည်းက နွားမကြီးထံမှနို့ 
ကိုနို့ နေခဲ့ တာဖြစ်တယ်လို့အမျိူးသားကြီး အောင်အုမ်း ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ပထမတော့ ၎င်းအနေနှင့် ကလေးငယ်အား နွားမကြီးထံမှာ ဆွဲယူကာတားဆီးခဲ့ ပါသေးတယ်လို့ အောင်
သို့ သော်လည်း ကလေးငယ်က အသံအကျယ်ကြီးဖြင့် အော်ဟစ်ငိုယိုကာတောင်းဆိုခဲ့ သည့် အတွက်လက်
လျော့ ခဲ့ လိုက်ရပြီး ထိုစဉ်ကတည်းက စပြီး ကလေးငယ်ဟာတစ်နေ့ လျှင်တစ်ကြိမ်၊သို့ မဟုတ်နှစ်ကြိမ် မှန်
မှန်ပင် နွားမကြီးထံမှ နို့ ကိုစို့ နေခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
သာဆိုဖက် ကလေးဟာ မိဘနှစ်ပါးစလုံး ထိုင်းနိုင်ငံသို့ အလုပ်လုပ်ရန်ထွက်ခွာသွားကတည်းက ကမ္ဗောဒီး
ယားနိုင်ငံ၊ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ ဆီယမ်ရိပ် ပြည်နယ်ရှိ အဘိုးအဘွားများနှင့် နေထိုင်ခဲ့ ရတာဖြစ်ပါ
နွားမကြီးက ကလေးငယ်နို့ စို့ သည်ကိုမည်သို့ မျှရန်မမူသော်လည်း ၎င်းအနေဖြင့် တော့ ရေရှည်တွင် မြေး
ကလေး၏ ကျန်းမာေ၇းအတွက် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်မိပါတယ်လို့အောင်အုမ်း ကဆိုပါတယ်...
A Cambodian man said his young grandson has lived partly on milk he suckles directly fromacow since he sawacalf do the same.
Um Oeung said 20-month-old Tha Sophat started suckling the cow in July after the boy's parents left their rural village in search of work.
Um Oeung said he pulled the boy away at first. He relented after his grandson protested loudly and the boy has suckled the cow's milk once or twiceaday since then.
Tha Sophat has lived with his grandparents in Siem Reap province in north west Cambodia since his parents moved to Thailand looking for work. Um Oeung said the cow doesn't mind the boy suckling but he is worried about his grandson's health if he continues.
Posted by Unknown | at 8:37 AM |4comments
'Lapdancers dressed as nuns put onasexy strip for Silvio at one of his bunga bunga parties'
အီတလီဝန်ကြီးချူပ်က ၎င်း၏အပျော်ကျူးသည့် ပါတီပွဲများတွင် ပွတ်သပ်မြူဆွယ်သည့် အကမယ်
လေးများအား သီလရှင်များကဲ့ သို့ ဝတ်ဆင်ခိုင်းကာ ခုနှစ်လွှာချွတ်ကခိုင်း...
သူ့ အတွက်ကတော့ ဘာသာတရားဆိုတာ စိတ်ကစားစရာလေပဲလား...
Religious bent: New allegation claim Silvio Berlusconi enjoyed lapdancers dressed as nuns at his infamous parties
ခုနှစ်လွှာချွတ်ကသည့် အပျော်မယ်ကလေးများအား ခရစ်ယာန်သီလရှင်များကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်စေကာကပြစေ
ခဲ့ သည်ကိုဖော်ထုတ်သိရှိခဲ့ ရသည့် အတွက် ကိုယ်ကျင့် သိက္ခာပျက်ယွင်းသူ၊ မသူတော်စာရင်းဝင် အီတလီ
၀န်ကြီးချူပ် ဆီလ်ဗီယိုဘာလုစကိုနီ အားယခုအခါ ခရစ်ယာန်သာသနာတော်အား ထိပါးပုတ်ခတ်ပြစ်မှား
စော်ကားသူအဖြစ် ထပ်မံစာရင်းသွင်း သတ်မှတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်...
ဟီရိ၊သြတပ္ပ အရှက်အကြောက်တရားကင်းမဲ့ နေပြီဖြစ်သည့် အသက် ၇၄ နှစ်အရွယ်ရှိ နိုင်ငံရေးသမားကြီး
ဟာ ၎င်းစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ ပျော်ပွဲပါတီပွဲများတွင် မိန်းကလေးငယ်များအား သီလရှင်ဆရာလေးများဝတ်ဆင်
လေ့ ရှိသည့် အတွင်းခံအင်္ကျီနှင့် ခေါင်းဆောင်းများအားဆင်မြန်းဝတ်ဆင်စေကာ သူနှင့် သူ၏မိတ်ဆွေများ
အား လိင်စိတ်ကြွစေသည့် အကများဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်စေခဲ့ ပါတယ်...
အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ဖာဒီအိုင်မန်း ရဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်အရ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိဗြိတိသျှ
သွေးတစ်ဝက်ပါသူကပြားမလေးသွားအထူးကု နီကိုးမီနက်တီ နှင့် အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိ ဘာဘရာဖက်
ဂီယိုလီ တို့ ဟာ (၀န်ကြီးချူပ်လည်းဖြစ် သူဌေးကြီးလည်းဖြစ်သည့် ) ဘာလုစကိုနီ၏ရှေ့ တော်မှောက်တွင် ပုရိသတို့ အကြိုက် ခပ်လန်းလန်းအကများဖြင့် မကပြခင် သီလရှင်ဆရာလေးများကဲ့ သို့ အယင်ဝတ်ဆင်
ခဲ့ ကြရတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်...
မော်ရိုကိုနွယ်ဖွား မစ္စအိုင်မန်း ကထိုပါတီပွဲသို့ ဧည့် သည်အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ ၇တာဖြစ်ပြီး သူမအားထိုကဲ့ 
သို့ သော်ပါတီပွဲများအား ရုပ်သံသတင်းကြေငြာသူ အီမီလီယိုဖီဒီ ( ၈၀ နှစ် ) နှင့် သတင်းမီဒီယာစီးပွားရေး
လုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ် လီလီမိုရာ ( ၅၅ နှစ် ) တို့ ကဖိတ်ကြားခဲ့ ကြတာဖြစ်ပါတယ်...
မီနက်တီ၊ ဖီဒီ နှင့် မိုရာ တို့ ဟာ ပါတီပွဲများတွင် ဖျော်ဖြေရန်အတွက် မိန်းကလေးအများအပြားအား စုစည်း
သိမ်းသွင်းခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...
" ကျွန်မပါတီပွဲကိုသွားခဲ့ ပြီး ဆီလ်ဗီယိုဘာလုစကိုနီ အပါအ၀င်တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့ တွေ့ ခဲ့ ပါတယ်..
အဲဒီပါတီပွဲမှာ ဘာဘရာဖက်ဂီယိုလီ နဲ့နီကိုးလ်မီနက်တီ တို့ လည်းရှိနေခဲ့ ပါတယ်...
ပါတီပွဲလုပ်တဲ့ အခန်းထဲမှာ တိုင်ဖက်ကဖို့ တိုင်တစ်ခုရှိနေပြီး (မိန်းကလေးတွေက ) သူတို့ က အနက်ရောင်
သီလရှင်အတွင်းခံအင်္ကျီတွေနဲ့ ခေါင်းဆောင်းအပါအ၀င် အနီရောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ကြက်ခြေလေးတွေပါ
ဒီဂျေ (ဂီတတေးသံများ စုစည်းတင်ဆက်သူ) ကတေးဂီတသီချင်းများအစွမ်းပြတင်ဆက်ပြီးနောက်ကောင်မ
လေး (အမျိူးသမီး) များက တစ်လွှာချင်းချွတ်သည့် ခုနှစ်လွှာချွတ်ပွဲပြသကာ နောက်ဆုံးတော့ အောက်ခံ၊
အတွင်းခံဘောင်းဘီများသာကျန်ရှိသည့်အချိန်တွင် တိုင်ပတ်ကပြကြရတာဖြစ်ပါတယ်..." တယ်လို့ မစ္စအိုင်
မန်း က ဗြိတိန်နိုင်ငံထုတ် သူရိယ သတင်းစာကြီးကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ဘဘဗိုလ်ချူပ်ကြီး အဲလေ...ဘဘ၀န်ကြီးချူပ် ( ကွင်းပိုင်ကြီးလို့ လည်းခေါ်နိုင်တယ်လေ...အေစီမီလန်
ဘောလုံးကလပ်အသင်းကိုပိုင်လို့ ) အတွက် မျက်စေ့ အစာ၊ စိတ်အစာကျွေးတဲ့ အနေနဲ့ 
ဆရာလေးများကဲ့ သို့ ဝတ်ဆင်ကာ တစ်လွှာစီချွတ်ပြီး တိုင်ပတ်ကပြခဲ့ ရပါတယ်...
Bad habit: Nicole Minetti, left, and Barbara Faggioli allegedly wore nuns' tunics and headgear while performingasexy striptease for Mr Berlusconi and guests
မစ္စအိုင်မန်း ကသူမအနေနှင့် မစ္စတာဘာလုစကိုနီအတွက် ဗိုက်လှုပ်၊ ခါးလှုပ်၊ တင်လှုပ် အကဟုခေါ်ဆို
သည့် belly dance ကပြခဲ့ ရသော်ငြားလည်း ယခုကဲ့ သို့ ဖျော်ဖြေနေရသည်ကိုမြင်တွေ့ ရသည့် အခါအံ့ 
သြတုန်လှုပ်သွားခဲ့ ရပါတယ် လို့ ဆိုပါတယ်...
ထူးထူးဆန်းဆန်းပင် သူမအနေနှင့် မစ္စတာဘာလုစကိုနီ အား လစ်ဗျားအာဏာရှင် မွန်မာကဒါဖီနှင့် အ
ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မည်သို့ ပေါင်းသင်းပြောဆိုဆက်ဆံရန်အကြံပေးခဲ့ သေးသည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြော
ကွင်းပိုင်ကြီး ၀န်ကြီးချူပ်ဘာလုစကိုနီဟာ ကပွဲရုံမှ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ကချေသည်ကလေး
အယ်လ်မာရို့ နှင့်လည်း ဘဘနှင့် သမီးဇတ်လမ်းထွင်ခဲ့ မှုဖြင့် တ၇ားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်...
အီတလီနိုင်ငံတွင် မိန်းကလေးများအသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင် နှစ်ဦးသဘောတူ ကြည်ဖြူလျှင်
လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခွင့် ရှိပေမယ့် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်အရွယ်ကို အခကြေးငွေပေးပြီး
Underage: Berlusconi is facing charges relating to nightclub dancer Karima El Mahroug, 17. The age of consent is 14 in Italy, but paying for sex with someone younger than 18 isacrime
မစ္စတာဘာလုစကိုနီကတော့ ၎င်း၏အပျော်သက်သက်ပြုလုပ်သည့် ပါတီပွဲများတွင် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာမိတ်ဆုံ
စားခြင်း၊ ၀ိုင်သောက်ခြင်း၊ စကားစမြည်ပြောခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်းများကလွဲ၍ တစ်ခြားမည်သည့် မဖွယ်မရာ
မသင့် လျော်တာမျိူးမပါဝင်ပါဘူးလို့ အစဉ်တစ်စိုက်ငြင်းဆိုထားခဲ့ ပါတယ်...
သို့ သော်လည်း ၎င်းအနေနှင့် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိ ခါးလှုပ်အကမယ်လေး ကရီမာအယ်လ်မာရို့ နှင့် 
အိပ်စက်ပျော်ပါးမှုဖြင့် လာမည့် လတွင် တရားစွဲဆိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အီတလီနိုင်ငံတွင် မိန်းကလေးများအသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင် နှစ်ဦးသဘောတူ ကြည်ဖြူလျှင်လိင်ဆက်ဆံ
နိုင်ခွင့် ရှိပေမယ့် အသက် ၁၈ နှစ်အောက်အရွယ်ကို အခကြေးငွေပေးပြီးပျော်ပါးလျှင်တော့ ပြစ်မှုမြောက်
ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ အထွတ်အမြတ်နိုင်ငံ၊မြို့ တော်မှာကိုပဲ အဲဒီဘာသာကိုစော်ကားတဲ့ အမှုပြုနိုင်ပါပေ
တယ်...( သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲဒီဘာသာကို ကိုးကွယ်မှာအသေအချာပါပဲ...)
၀ီကီထဲကအဆိုအရတော့ ကောင်မလေးတွေခေါ်ပြီး ရင်ငွေ့ လှုံကာ ခုနှစ်လွှာချွတ်ပြီးတိုင်ပတ်ကခိုင်းတဲ့ 
ပါတီပွဲတွေ ( bunga bunga party ) လုပ်ဖို့ အခုတော့ သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့ လစ်ဗျားအာဏာရှင်ကဒါဖီ ကြီးက
မစ္စတာဘာလုစကိုနီ ကိုနည်းပေးလမ်းပြသင်ကြားပေးခဲ့ တယ်ဆိုပဲ...
Bad boy Italian premier Silvio Berlusconi can now add blasphemy to his growing list of misdemeanors, after it was revealed that lapdancers dressed as nuns performed at his infamous 'bunga bunga' parties.
The seemingly shameless 74-year-old politician is said to have organised girls to wear religious tunics and head gear while performing sexy routines for him and his guests.
According toastatement from Fadile Imane, 26, half-British dental hygienist Nicole Minetti, 25, and Barbara Faggioli, 25, dressed as nuns before performingasexy dance routine in front of Berlusconi.
Moroccan-born Miss Imane wasaguest at the party, and said she had been invited to the parties by TV newsreader Emilio Fede, 80, and showbiz agent Lele Mora, 55.
Minetti, Fede and Mora allegedly recruitedastring of women to be part of the entertainment at the parties.
Miss Imane is quoted in The Sun as saying: 'I went to the party and I met Silvio Berlusconi and the other girls, and also there was Barbara Faggioli and Nicole Minetti.
'In the party room where there wasapole for dancing they both put on dark nun tunics, including the headcover andared cross.
'A DJ who was there played music and they both then performedasexy striptease, eventually ending up dancing around the pole in their underwear.'
Of course, Miss Imane added that she was 'shocked' by the performance, despite admitting that she had 'performedabelly dance for Berlusconi'.
Bizarrely, she also revealed that she had advised Mr Berlusconi on how best to deal with Libyan dictator Muammar Gadaffi.
Mr Berlusconi has always denied that anything other than 'convivial dinners, wine, food, talking and singing' went on at the bunga bunga parties.
Nevertheless, he is facing trial next month of having sex with then 17-year-old belly dancer Karima El Mahroug.
The age of consent in Italy is 14 but, but paying for sex withawoman under 18 is prostitution withaminor, and thereforeacrime.
Posted by Unknown | at 10:04 AM |0comments